Torkia am-pitendrena milina… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 15:44 GMT
(lahatsoratra teny anglisy janoary 2006)
Ho fohy noho ny mahazatra ny amin'ity herinandro ity, miaraha amiko azafady….
Turkish Torque mankalaza ny takelaka faha-1000 amin'ity herinandro ity, arahabaina! Ugur nandika lahatsoratra tsara dia tsara amin'ny fomba handravan'ny fampitam-baovao sy ny tontolon'ny fialam-boly ny kolontsaina tiorka ary naneho hevitra tamin'ny tsahon'ny fihavaozana miozolomana. Nosoratany ihany koa ny lalaom-panorona politika vaovao ataon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny tiorka sy ny hoe ahoana moa ny fihetseham-po tamin'ny fifidianana ny HAMAS tao Palestine.
Talk Turkey nanoratra momba ny Etazonian'i Eurasia ho avy izay niteraka adihevitra tena mahaliana sy fanehoan-kevitra momba ny mpitsara Kiorda vaovao hisolo mpitsara Kiorda hafa mba hitsara an'i Saddam Hussein.
Lahatsoratra tena mahafinaritra avy amin'ny The Need to Know mangataka an'izao tontolo izao mba hamela irery an'i Iran, mila bonus lehibe izy.
Zen in the Kitchen manoratra momba ny tongolo be sy ny tongolo gasy manampy anao hahatady ny ankavianao amin'ny ankavananao.
Mavi Boncuk miverina miaraka amin'ny lahatsoratra momba ny ankizy natsangana ao Ataturk. Ny ranomandry no lohahevitra amin'ny lahatsoratra avy amin'ny Metroblogging:Istanbul ary koa iray avy aminny Field Diary an'i Erkan, izay tsy lahatsoratra tokana ihany, fa roa sy telo.
Amerikan Turk nanoratra koa momba ny tafio-dranomandry lehibe tao Istanbul, saingy nitantara zavatra hafa tahaka ny firongatry ny kongona, takalon'aina Tiorka ao Iran- tantara tsy tantarain'ny fampahalalam-baovao mahazatra izany, ary ny (ankafiziko manokana tamin'ny herinandro) lahatsoratra momba ny kilalaon-teny malaza tamin'ny fivoriana amin'ny birao.
Ny zava-misin'ny herinandro: We Are the TURKS, bilaogy vaovao natokana hanadihadiana sy hanoratana momba ireo Tiorka malaza amin'ny fandraharahana sy ny kolontsaina Amerikana.